Ny kintan'ny "Tompon'ny tafiotra" farany dia nipoaka tamin'i Sonny Pacheco
Amin'ny taom-baovao tsy misy fifandraisana efa antitra! Ity no karazana fikarakarana nomen'ny psikology nahazo fanabeazana. Mazava ho azy, ny mpilalao horonantsarin'i Jeremy Renner dia nitarika ny fitsipika toy izany, rehefa niezaka ny hamarana ny fisaraham-panambadiana lava sy tsy mahafinaritra.
Tao amin'ny gazety dia nisy ny fampahalalam-baovao fa tsy naharesy ny fananan'ilay mpiara-monina, izay nolazainy, ilay modely kanadianina Sonny Pacheco.
Ilay mpilalao horonantsary "The City of Thieves" dia nanao hetra mba handoavana ny volan'ny Sonny isam-bolana ho an'ny zanany vavy, zazakely Avu. Nifanaiky ny 13 000 dolara ny antoko. Tsy halefa ny fikojakoana an'i Jeremy be indrindra.
Kristen Stewart, Keanu Reeves, Elijah Wood ary ny hafa ao amin'ny fetiben'ny sarimihetsika Sundance-2017
Ny fitomboan'i Jeremy Renner no nahalehibe an'i Hollywood
Jeremy Renner sy Amy Adams
Fanambadiana miafina ary ... fisarahana vetivety
Noho ny antony maro, ny mpilalao Amerikana sy ny mpiara-belona taminy dia nanafina ny fanambadiany nandritra ny fotoana ela. Momba ny zava-nisy tamin'i Sonny - ny vadiny, Jeremy dia niteny tamin'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny resadresaka tamin'ny mpanao gazety. Marina fa tsy naharitra ela ny fiarahan'izy ireo. Latsaky ny herintaona taty aoriana, ilay modely nalefan'ny fisaraham-panambadiana ary nanomboka ady lava-dalana nandritra ny fotoana ela tamin'ny fizarana ny fananana.
Irina Sheik dia ho vetivety eo amin'ny toeran'ny mariazy mendrika
Tsy ny dihy, fa ny hira ihany koa: Dita von Teese dia nandrakitra ny lahatsary voalohany
Shannen Doherty dia nampiseho bozaka be dia be
Herinandro taty aorian'ny nahaterahan'i Natalya Vodyanova dia nandeha teny amin'ny lampihazo
Bella Hadid no nanakambana an'i Irina Sheik sy ireo hatsarana hafa tao amin'ny premiere "The Stranger"
Gina Torres dia rava niaraka tamin'i Lawrence Fishburne vadiny ary efa nahavita nanambady
Ny fiainan'i Antonio Banderas dia niova tanteraka!
Brooklyn Beckham dia nanao tatoazy toy ny an'i Kara Delevin
Iggy Pop sy David Bowie
Ny zanakavavin'i Bill Clinton sy ny vadiny dia manantena zaza faharoa amin'ny fahavaratra
Prince Harry sy Megan Markle dia nankany Jamaika ho fampakaram-bady
Sarin'i David Duchovny
Volokano volafotsy vita amin'ny embona
Vorona tsara tarehy ao amin'ny efitrano fandriana
Fitaovana amin'ny geranium
Fasan'ny trano hazo
Fampiofanana ny Shepherd German
Ahoana ny fomba hisarihana ny vintana tsara?
Fanaovana fitsaboana magnetic resonance
The Bullfucker Golden
Snake Gorynych teo amin'ny lohany telo tao amin'ny angano slavy
"Raffaello" miaraka amin'ny tapa-kobay - raha tokony ho teny an'arivony
Nahoana no maitso?
Nahoana no manonofy ririnina?
"Bouquets of sweets" - kilasy maoderina
Salady lava maina fatiantoka
Ny fiainan'i Scott Eastwood
Renivohitra renivohitra rehefa teraka ny kambana
Tena matanjaka tsara
Inona no mahatsara ny sandriny?
Ahoana no ahafahana miady?
Trano fisakafoana rindrina